Ku soo dhowow WIC!
Sida loo helo xafiiska WIC ama lambarka telefoonka
Sida loo helo dukaanka WIC
WICShopper - Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)
Oggol - Qalabkani waa WIC la oggol yahay. Waa hab fiican in la ogaado haddii cunto WIC la oggol yahay. Waxyaabaha ay tahay inaad ogaato waa inaad arki kartaa sheyga la ogol yahay, laakiin ma aha mid ku jira faa'iidooyinka cuntada ee WIC, markaa ma iibsan kartid WIC. Ilaa illaa WIC faa'iido u xirto barnaamijka WICShopper, farriintan "la oggol yahay" laguma dabaqi karo manfacyada qoyskaaga. Tusaale ahaan, ilmo hal sano jir ah wuxuu helayaa caano dhan. Haddii aadan haysan ilmo sannad jir ah oo qoyskaaga ka mid ah, caanaha oo dhan ma noqon doonaan qayb ka mid ah faa'iidooyinka cuntada ee WIC, adiguna ma awoodi doontid inaad caano ka iibsatid boosteejada.
Ma aha wax WIC ah - Taas macnaheedu waa WIC ma aysan ansixin sheygan. Haddii aad u maleyneyso inaad awoodi doontid inaad cuntadaas ku iibsato faa'iidooyinka cuntada WIC noo soo sheeg adiga oo isticmaalaya "Anigu ma iibsan karno!" [HC (3) oo ku yaala appkan.
Lama ogaan karo - Tani macnaheedu waa app aan akhrin karin barcode. Haddii ay sabab u tahay, way adag tahay in barnaamijka la akhriyo barcode aad hesho farriintan. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa badhanka, Fur Key UPC, Appka si aad u geliso lambarka 12-digit UPC ee ku hoos yaal barkinta.
Q: Waxaan isku dayey inaan baaro miro iyo khudaar cusub. Ama iyagu ha isku dhejin ama ay soo baxaan sida aan loo oggolayn. Waa maxay sababta?
A: Appi ma samayn kartaa miraha iyo khudaarta cusub. Hase yeeshee, warka wanaagsan waa inaad ku baari kartaa miraha iyo khudaarta la qaboojiyay.
A: "Tani ma iibsan karto!"Waxay kuu ogolaaneysaa inaad u sheegto WIC marka sheyga cuntada ee aad isku dayeyso inaad ka iibsato faa'iidooyinkaaga cuntada WIC waa la diidaa meesha taagan. Markaad isticmaasho, "Anigu ma iibsan karno" barnaamijka WICShopper, waxaan ka helaynaa ogaysiis xafiiska WIC ee Gobolka. Waxaan dib u eegeynaa dhammaan waxyaalihii aad noo sheegto oo aad la shaqeysid dukaamada si aad ugu oggolaato cuntooyinka laguu oggol yahay!
Q: Haddii aan u maleynayo in aan awoodo inaan iibsado cunto WIC ah, waxaanan kuu sheegi doonaa, goormaan ogaanayaa haddii alaabtayda cuntadu lagu daro?
A: Waxaad ku hubin kartaa adigoo shaygaaga ku sawiraaya booqashadaada xigta.
West Virginia WIC Liiska Cuntada Lagu Ogaaday